Vista's Colorful Planet: Arrived !! Arrived !!
ခုတလေ စာဖတ်ရမှာ အလွန်ပျင်းနေပါတယ် ဖတ်ပြီးပြောပြဘာာာာာာာာာာ
ဇတ်လမ်းကတော့ခုပြောတောင်ရပါတယ် ဟိဟိ ..
ဒါဆို ဒီနေ့အစ အဆုံးပြောပြရမယ် ဒါပဲ
အဲ့လို စာအုပ်မျိုးကြိုက်ရင် Dorian Gray တို့ Brave New World တို့ ဖတ်ကြည့်ပါလား?
ဒီမှာ classic စာအုပ်တွေ ဝယ်ရတာ လွယ်တယ်၊ လိုချင်ရင်မှာပါ၊ အရင်က UK မှာပဲ ရတဲ့ စာအုပ်တွေကို သူငယ်ချင်းကို sg ကို ပို့ပေးခိုင်းဖူးတယ်
royalty free စာအုပ်တွေက ဒီမှာလဲ ဖတ်လို့ ရတယ်၊ www.gutenberg.org
စာအုပ်တွေ ဖတ်တာ ဘယ်တခုမှ ၂ မျက်နှာကနေ ရှေ့ကို မတက်တော့ဘူး။ ရုပ်ရှင် ပြောင်းကြည့်နေမိတယ်။ အရင်နဲ့ ပြောင်းပြန်။
"khin oo may Says:
ဟုတ်ပါရဲ့ စင်ကာပူကို မျက်စိလည်လမ်းမှားရောက်နေပုံပဲ
ဗစ် E စားကျွမ်းတယ်ပေါ့ (အဲ မှားလို့ပြောချင်ဇောလောသွားတယ်) E စကားကျွမ်းတယ်ပေါ့
တော်ထှာဟာ ဘာသာပြန်ပြီး အဲ့ဝတ္တုကို ဗစ် ဗားရှင်းဆိုပြီး ပိုစ့်တင်ပါလား
တို့ က E လို ကောင်း၂ မဖတ်တတ်လို့ ပါ
အင်တာနေရှင်နယ် ဘာသာစကားနဲ့ရုံးမှာပြောနေကျလေ ဒါ့ကြောင့်
နော့် ဗစ် တင်ပေးနော် သိချင်တယ် ဇာတ်လမ်းကို စာအုပ် ငှားရမှာ အရမ်း အရမ်းကို အားနာလို့မငှားတော့ဘူး ဗစ်ပဲ ပြောပြ
ဗစ်ဗားရှင်းမလုပ်ပရစေနဲ့ သိခြင်ရင်ပြောပြပါ့မယ် ဒီအတိုင်း
်တို့ဆို ဘာသာပြန်ပဲ ဖတ်တတ်တယ်။
Great expectation ကို အရမ်းဖတ်ချင်နေတာ.. ဘာသာပြန်တော့ ဖတ်ဖူးတယ်..